५० शहरमा टेलिकमको फोरजी सेवा - Aathikbazarnews.com ५० शहरमा टेलिकमको फोरजी सेवा -
गभर्नर अधिकारीले भने-‘दक्षिण एसियामा अब हामी साझा मुद्राको अवधारणामा जानुपर्छ’
एनआईसी एशिया बैंकको मोबाइल बैंकिङ्ग एप, वेबसाइट/इन्टरनेट बैंकिङ एनटिसी नेटवर्कमा निःशुल्क चलाउन सकिने
नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ढुङ्गानाद्धारा पदभार ग्रहण
सेञ्चुरी बैंकका ग्राहकले सिद्धार्थनगर सिटी अस्पताल भैरहवामा १०% छुट पाउने
सानिमा बैंक नयाँ शाखा काठमाण्डौको नेपालटारमा
माछापुच्छ्रे बैंकको नयाँ शाखा सिम्ले बजारमा, शाखा सञ्जाल १६५ पुग्यो
सोमवार, अशोज १३, २०७६
सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले देशभरका ५० शहरी क्षेत्रमा चौथो पुस्ताको फोरजी सेवा सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । सो सेवा आउँदो बुधबारदेखि शुरु हुनेछ । निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले देशका अधिकांश स्थानमा फोरजी सेवा पु¥याएको दावी गरिरहँदा सरकारी स्वामित्वको टेलिकमले लामो प्रयास पछि सेवा विस्तार गर्न लागेको हो ।
कम्पनीले काठमाडौँमा कार्यक्रमको आयोजना गरी फोरजी सेवा विस्तार भएको घोषणा गर्ने र उक्त कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्नुहुने जनाइएको छ । टेलिकमले यसअघि २०७३ पुस १७ गतेदेखि काठमाडौँ र पोखरामा फोर जी सेवा पु¥याएको थियो । टेलिकमले बढी व्यवसायिक र व्यापारिक कारोबार हुने तथा बढी जनघनत्व भएका स्थान चयन गरेर सेवा विस्तार गर्न लागेको हो । टेलिकमका प्रवक्ता प्रतिभा वैद्यका अनुसार हालसम्मको तयारी अनुसार ५० शहरी तथा नगर क्षेत्रमा चौथो पुस्ताको फोरजी सेवा उपलब्ध गराउने तयारी अनुसार काम भइरहेको छ । त्यसका लागि करीब ११० बढी स्थानमा बिटिएस टावर जडान गरिसकेको छ ।
बुधबारसम्म त्यस्ता टावरको संख्या १५० सम्म पुग्नेछ । हरेक दिन एक दर्जन टावरको संख्या थपिएको र दु्रतगतिमा काम भइरहेकाले तोकिए भन्दा बढी स्थानमा सेवा पु¥याउने योजनामा आफूहरु रहेको प्रवक्ता वैद्यको भनाइ छ । उहाँका अनुसार चन्द्रगढी, विर्तामोड, दमक, विराटनगर, इनरुवा, धरान, धनकुटामा फोर जी सेवा सञ्चालनमा आउनेछ । यस्तै जनकपुर, जलेश्वर, मलङ्गवा, जलेश्वर, बारा, पर्सा, सिमरा, कलैया, गौरमा चौथो पुस्ताको फोरजी सेवा शुरु हुनेछ । यस्तै धादिङ, काभ्रेपलान्चोक, सिन्धुपाल्चोक, विदुर, मन्थली, भिमेश्वर, सिन्धुलीमाडी, पर्वत, कुश्मा, बाग्लुङ, चितवन, सौराहा, तौलिहवा, बुटवल, देवदहमा त्यस्तो सेवा विस्तार हुनेछ । तुल्सीपुर, घोराही, बाँकेको नेपालगन्ज, कोहलपुर भीमदत्तनगर, झलारी, पिपलाडी, चौमला र अत्तरियामा सेवा सञ्चालनमा आउनेछ । कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा सोही दिनदेखि उक्त सेवा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको टेलिकमका सहायक प्रवक्ता कृष्ण भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले तोकिएको समयमा नै टेलिकमको फोरजी सेवा विस्तार गर्न दिनु भएको निर्देशन अनुसार नै काम शुरु भएको आठ महिना पुग्दा नपुग्दै मुलुकका ५० बढी स्थानमा एकै पटक उक्त सेवा पुग्न लागेको हो । फोरजी एलटीई सेवा आगामी माघसम्म देशभर विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । गत माघमा सम्झौता भए बमोजिम नै एक वर्षभित्र देशभर नै उक्त सेवा पु¥याउने लक्ष्यसाथ युद्धस्तरका काम भइरहेको टेलिकमले जनाएको छ । उक्त सेवा विस्तारका लागि टेलिकमले रु १८ अर्ब खर्च गरेको छ । मन्त्री बाँस्कोटाले डिजिटल नेपालको अवधारणालाई सरकारले अगाडि बढाएको सन्दर्भमा फोरजी सेवा एउटा महत्वपूर्ण साधन भएको बताउँदै आउनु भएको छ । सूचना तथा प्रविधिको क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्ने लक्ष्यका साथ गत माघमा फोरजी सेवाका लागि आवश्यक पर्ने ‘कोर नेटवर्क’ र ‘रेडियो एक्सेस नेटवर्क’ जडानका लागि चिनियाँ कम्पनी जेडटीई कर्पाेरेसन र हङकङको सीसीएसआई कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो ।
सम्झौता अनुसार तोकिएको अवधि पूरा हुन चार महिना बाँकी रहेको भएपनि निर्धारित समयमै काम सकिने देखिएको छ । नेपालमा हरेक काम तोकिएको समयमा पूरा नहुने र अनेकन बाहना बनाएर पन्छने प्रवृत्तिबाट आहात भएको देशले फोरजी सेवा भने तोकिएको समयमा नै पाउने भएका छन् । उक्त सेवा विस्तारका लागि साँझ बिहान नभनी दैनिक १८ घण्टा बढी काम भइरहेको छ । परिचालन तथा आवश्यक समन्वयका लागि टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले नेतृत्व लिइरहनु भएको छ ।
कुन स्थानको काम के भयो, प्रगति के छ भन्ने देखि समस्या समाधानका लागि प्रबन्ध निर्देशक स्वयम् नै लागेपछि अन्य कर्मचारीलाई दबाव परेको छ । दैनिक नै नयाँ नयाँ प्रगतिका विवरण टेलिकममा प्राप्त भइरहेका छन् । प्रतिस्पर्धाको युगमा निजी सेवा प्रदायकले करीब करीब देशभर सेवा पु¥याइरहेको अवस्थामा सरकारी स्वामित्वको कम्पनीपछि परेको त होइन भन्ने आम नागरिकको गुनासोलाई सम्बोधन हुने गरी काम भइरहेको टेलिकमले जनाएको छ । टेलिकमले फोरजीका लागि आवश्यक पर्ने ‘कोर नेटवर्क’ काठमाडौं र बुटवलमा राखेको छ । टावरको फाउन्डेसन, विद्युत् जडान, घरवालासँगको सम्झौता, जग्गा भाडाको सबै काम सम्पन्न गरिसकेको छ ।
देशभर सेवा विस्तार गरेर थप ६५ लाख ग्राहक थप्ने योजनासाथ काम भइरहेको टेलिकमको दावी छ । गत असार मसान्तको विवरण अनुसार हाल टेलिकमको ग्राहक दुई करोड २६ लाख ९६ हजार छन् । त्यसमा मोबाइल फोन प्रयोग गर्नेको सङ्ख्या मात्रै दुई करोडको हाराहारीमा रहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ । टेलिकमले गत शुक्रबार मात्रै फोरजी विस्तार गर्ने स्थानको आवश्यक परिक्षण गरेको थियो । केही दिन पहिले रासससँग कुरा गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले नेपाल टेलिकमको फोरजी सेवा विस्तार युद्धस्तरमा भइरहेको र तोकिएको समयमा पूरा हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
उहाँले टेलिकमको फोरजी सेवा विस्तार र सञ्चालनको अन्तिम तयारी भइरहेको र त्यसका लागि आवश्यक सबै संयन्त्र परिचालन गरिएको बताउनुभएको थियो । यस्तै टेलिकमले दशैंको अवसरमा आइतबार घटस्थापनादेखि नै फोरजी र अन्य सेवामा विशेष छुट दिएको छ । टेलिकमको फोरजी सीम परिवर्तन गर्दा कुनै शुल्क नलाग्ने जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार पहिलो पटक फोरजी नेटवर्कमा दर्ता हुने ग्राहकले दुई दिनको समयसहितको दुई सय एमबि डाटा बोनस पाउने व्यवस्था गरेको छ । दोस्रो र तेस्रो पुस्ताका सीम चलाइरहेका ग्राहकले सामान्य रुमपा नै आफ्नो सीमलाई फोर जी बनाउन सक्ने जनाएको छ ।
इसेवाबाट बीमाशुल्क भुक्तानी गर्दा दुई सय रूपैयाँ क्यासब्याक पाइने
आइएमई पेबाट उडान टिकट काट्दा तीन सय बोनस पाइने
कमेडी हवमा डिशहोम फाईवरनेटको सह–प्रायोजन
आइएमई पेमार्फत फुडमान्डुको भुक्तानीमा १५% क्यासब्याक
‘आइएमई पे’ मोबाइल वालेटले ‘रिफर एन्ड अर्न’ अफरमार्फत दिँदैछ रु. २५ बोनस
फोनपेले पायो आइएसओबाट प्रमाणिकरण
अजोड इन्स्योरेन्स र ज्यापु समाज यलबीच बीमा सचेतना सम्बन्धी समझदारी
बैंक अफ काठमाण्डूका ग्राहकहरुलाई युरोपा फिटनेस सेन्टरमा २५% छुट
नेपाली अर्थतन्त्र गम्भीर संकटको डिलमा, गर्भनर अधिकारी र अर्थमन्त्री बीच फेरि वाक युद्ध ?
कालो सूचीमा फसेको बंगलादेशी कम्पनीलाई इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको ४ अर्ब ६८ करोडमा ठेक्काः करोडौं घोटला भएको पुष्टी ? (प्रमाण सहित)
अर्थमन्त्री शर्मा र नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष हमालद्वारा राष्ट्र बैंकका गर्भनर अधिकारी माथी फेरि आक्रमणः आफ्ना कमजोरी लुकाउन अरुलाई दोष ?
कामना सेवाका र इष्टर्न एजेन्सीज बीच सम्झौता
डिस होमले डाक्यो साधारणसभा, हकप्रद र बोनस शेयर पछि आइपिओ निष्काशन गर्ने
मुक्तिनाथलाई भेटी अब प्रभु बैंकको क्यूआर कोडबाट
ग्लोबल आइएमई लघुवित्तद्वारा डस्बिन वितरण
ग्लोबल आइएमई बैंकद्वारा किसान कार्डमार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गर्न सम्झौता
लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी १७ औं वर्षमा, उत्कृष्ट बीमा सेवा प्रवाह गर्ने प्रतिबद्धता
सिटिजन्स छाडेका देवकोटा महालक्ष्मी विकास बैंकको सीईओ नियुक्त
डिजिटल वालेट खल्तीमा वर्ल्ड लिंकको लगानी